अफसेट VS स्ट्रेट (विपरीत) ह्यान्डलहरू | अफसेट र क्लासिक भिन्नताहरू - जापान कैंची
त्यहाँ धेरै आकार, आकार र कैंचीका लागि सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। हामीसँग तपाईलाई ट्र्याकमा राख्न मद्दत गर्न केही सल्लाहहरू छन्!
तपाईं कि त हात वा मेशिन द्वारा आफ्नो कैंची बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्तनिर्मित कैंचीहरू अधिक टिकाऊ र अधिक मूल्यवान हुन्छन् किनकि तिनीहरूलाई थप कामको आवश्यक पर्दछ। उच्च गुणस्तरको हस्तनिर्मित कैंची उत्कृष्ट सामग्री र प्रक्रियाबाट बनेका छन् र स्थायी गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न।
उच्च गुणस्तरको कैंची सामान्यतया परम्परागत जापानी कम्पनीहरु द्वारा बनाईन्छ। दागहरूमा थप बल र प्रतिरोधको लागि, राम्रो गुणस्तरको क्यान्सरहरू संयोजन कार्बन, स्टेनलेस स्टील र क्रोमबाट बनेको हुन्छ।
किनमेल सुझावहरू र संकेतहरू यो सबै आकार, शैली, र फिट तल आउँछ। पहिलो नियम क्यान्सर छनौट गर्दा यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईंको मध्य र अनुक्रमणिका औंलाहरूले पिभोट क्षेत्रमा छुदैनन्। स्पष्ट मार्ग चलिरहेको ब्लेडका लागि आवश्यक छ।
सिधा हात कैंची के हो?
सीधा ह्यान्डलहरू नाइहरू र कपालका लागि सिंचीको सबैभन्दा सामान्य प्रकारहरू हुन्।
सीधा, क्लासिक वा विपक्षी ह्यान्डलहरू ती हुन् जसले आफैंको औंलाले आफ्ना कैंची प्रयोग गर्छन्।
धेरै वर्षको लागि यो ह्यान्डल डिजाइन मात्र एक मात्र उपलब्ध थियो। यो डिजाइन यति लोकप्रिय थियो कि यो अझै पनि उद्योग मानक छ, सम्भावित नाडी र हात स्वास्थ्य सरोकार भएता पनि।
यदि यो लामो अवधिको लागि प्रयोग गरीन्छ भने सिसामोरको यस आकारले सिन्ड्रोमहरू समान वा कारपाल टनेलसँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ।
मेरो कैंचीमा अफसेट ह्यान्डल कस्तो देखिन्छ?
पेशेवरहरूको लागि, अफसेट ह्याण्डल सब भन्दा साधारण आधुनिक हेयरस्टाइलि handle ह्याण्डल हो। यसले एर्गोनोमिक समर्थन प्रदान गर्दछ र आरएसआईको सम्भावना कम गर्दछ।
व्यक्ति जो एक हातले आफ्नो कैंची समात्न रुचाउँदछन्, जस्तै अफसेट ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्नेहरू, अफसेट ह्यान्डलहरूको आधुनिक डिजाइन मनपर्दछ। यो ह्यान्डल डिजाइनले अधिक प्राकृतिक काट्ने स्थितिको लागि अनुमति दिन्छ।
यो डिजाईनले तपाईको हातले अधिक आरामपूर्वक काट्न मद्दत पुर्‍याउँछ, तर ब्लेडलाई उचित स्थितिमा राख्न तपाईले अझै आफ्नो कुहिनो उठाउनु पर्छ। औंठी ह्यान्डल छोटो छ, जसले थम्ब एक्सटेन्सन कम गर्दछ।
अफसेटहरू कैंची बनाम स्ट्रेट (विपरीत) ह्यान्डल कतराहरू
स्टाईललाई सीधा वा अफसेटको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ, मूर्तिकार गरिएको, वा होइन, ट्या with्ग बिना वा बिना। एक मूर्तिकला गरिएको हातले तपाइँको कलाईमा र अधिक स्वतन्त्रताको लागि अनुमति दिन्छ र तपाइँको कटौतीलाई कुनै दबाब वा तनाव नगुमाईकन। टाang्गले औंला आरामको रूपमा कार्य गर्दछ र थप स्थिरता, आराम र नियन्त्रण प्रदान गर्दछ।
औंठीको घण्टीको स्थिति निर्धारण गरिन्छ कि तिनीहरू सीधा छन् वा अफसेट छन्। सिधा कैंचीले तपाइँको औंठाको सिधा तपाइँको तेर्सो औंला मुनि राख्नेछ। एक अफसेट कैंची तपाईंको थम्ब अधिक प्राकृतिक स्थान मा स्थिति। यो केवल एक आराम समस्या हो। यदि तपाइँको कैंचीले सहज महसुस गर्दछ भने, तपाइँ तपाइँको कटौती अधिक सहि कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
त्यहाँ दुई प्रकारका कैंची हुन्छन्: ती सम्मानित भएका र माइक्रो-फाइन सेराटेड किनारहरू सहित। केवल honed, honed- ब्लेड कैंची काट्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेरेटेड ब्लेडले कपाल तान्न सक्छ।
तपाईंको हातमा कती सीधा र अफसेट ह्यान्डलहरू फिट हुन्छन्
यो कैंची छनौट गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। औंठी औठी तपाईको थम्बनेलको ठीक अगाडि राखिनुपर्दछ।
तपाईंको तेस्रो औंलाको दोस्रो पछाडि तपाईंको औंला औठीको अगाडि हुनुपर्छ। यदि तपाईं यी दुई बिन्दुहरू ठीकसँग फिट गर्नुहुन्न भने, तपाईंको औंलाले उनीहरूलाई स्लाइड गर्दछ। जब तपाइँ तपाइँको होल्डिंग टेक्नीक समायोजित गर्नुहुन्छ, तपाइँ काट्ने किनारहरूमा अनावश्यक दबाब राख्नुहुनेछ। यसले तपाईंको कैंचीलाई सामान्य भन्दा blunter बनाउँदछ।
म यो सीनेबाट ह्यान्डसेट अफसेटको बारेमा लेख पढें पछि मेरो छातीबाट छुट्न चाहन्छु। त्यहाँ बाहिर स्पष्ट देखिन्छ धेरै अलग शैली कपाल कैंची। ती मध्ये केहि स्पष्ट रूपमा उच्च-गुणवत्ताका छन् जसले मलाई आश्चर्य गरीरहेको छ कि चेनमा कति कपाल स्टाइलिस्टहरू छन् (म कुनै पनि नाम उल्लेख गर्दिन) यहाँ उल्लेख गरिएको जस्तो गुणस्तरीय उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछौं। कसैलाई कुनै विचार छ?